नेपालमा चर्चामा आउने दुई ‘द्योतक’
प्रकासित मिति : २५ भाद्र २०७८, शुक्रबार १६:०६ प्रकासित समय : १६:०६
ओखलढुङ्गान्युज । भदौ, २०७८ । नेपालको राजनैतिक उतारचढावमा २००७ साल देखि हालसम्म चर्चा र महत्वमा रहेका दुई। हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यतानुसार अझ भनौ मानव सभ्यताको विकास भएदेखि नै हामी सबैको इच्छा चाहना र ध्येय भनेको १ नम्बर नै हुने वा बनाउने हो । चाहे त्यो पदमा होस्, चाहे पैसामा होस् । चाहे पावरमा होस् या त प्रगती अनि प्रतिष्ठा कै कुरामा होस् । अरु त अरु, हामी झुलो हालेर चक्मक द्वारा निकालिने आगो समेत एकैपटकमा निस्केको (एकचोटे) लाई नै राम्रो मान्ने गर्छौ । धार्मिक मान्यताहरुमा पनि एकैपटकमा फत्ते हुने कर्मलाई शुभ मान्ने गर्छौ । अनि अरु कुरामा त दोस्रो वरियता, दोस्रो प्रयास, दोस्रो सम्बन्ध वा दोस्रो वर्ग, लिङ्ग कुनै पनि हालतमा चाहने कुरै भएन । तर कतिपय अवस्थामा नचाँहदा नचाँहदै पनि स्विकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिहरु अगाडि देखा पर्ने गर्दछ । यस्तै केही ऐतिहासिक घटनाक्रमको तथ्यहरुको टिपोटलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । जो नेपाली राजनैतिक बृतमा समयकाल सँगै सकारात्मक या नकारात्मक कुनै न कुनै तरिका बाट चर्चामा रहन गयो ।
पहिलो दुई – एकै व्यक्ति दुईपटक राजा
राजा ज्ञानेन्द्र शाह । जन्म २३ असार, २००४ । नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजा हुने पहिला व्यक्ति । नेपालका अन्तिम शाहवंशीय राजा पनि हुन् उनी। उनी परिस्थितिले दुई पटक नेपालका राजा भए, तर परिस्थिति बस दुबैपटक बाहिरिनु पर्यो । २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेला हजुरबुवा श्री ५ त्रिभुवन र बुवा श्री ५ महेन्द्रले देश छाडेर भारतमा शरण लिन गएपछि राणा शासकहरूले उनलाई पहिलोपटक राजा बनाएका थिए । अनि राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि उनी पुनः दोस्रो पटक नेपालका राजा भएका हुन् । यिनै घटनाक्रम र राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थितिका कारण उनी गद्दीबाट बिदा हुनु परेको थियो ।
दोश्रो दुई – प्रजातन्त्रको दुई पटक जन्म
नेपाली काङ्ग्रेसको वि.सं. २००७ साल असोज ११—१२, बैरगनियामा भएको सम्मेलनले राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्यो । २१ कार्तिक २००७ मा क्रान्तिको घोषणा भएसँगै लगभग ५ महिना लामो सशस्त्र जनबिद्रोहका बिच तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राणा, नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनबिच (१२ फेब्रुवरी १९५१) १ फागुन २००७ मा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो । ५ शर्तहरु राखी विक्रम संवत् २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापनाको शाहि घोषणा भयो ।
तर एकदशक नबित्दै २०१७ साल पुस १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गर्दै पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरे । लगभग तिन दशक पश्चात् २०४६ साल फागुन ७ गते देखि चैत्र २६ सम्म भएको जनआन्दोलनको दवावको कारण २०४६ साल चैत्र २६ गते राजा विरेन्द्रद्वारा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतसँग छलफल र सहमति गरि सोहि दिन नै निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुर्नबहालीसंगै देशमा दोस्रोपटक प्रजातन्त्रको स्थापना भयो ।
तेस्रो दुई – जनयुद्ध दबाउन दुईपटक कू
सर्वहारा जनताको मुक्ती र मुलुकको पद्धति परिवर्तन र बिकासको निमित्त २०५२ फागुन २ गते शंखघोष भएको तत्कालीन जनयुद्ध लाई दबाउन र आफू राजतन्त्रमा रहिरहन प्रयास गरे । सोहि अनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ साल असोज १८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषित गर्दै तात्कालिन सरकार अपदस्त गरिदिए । राजनीतिक नेताहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने प्रयास भएको थियो । २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा नै पुनः दोस्रोपटक कू गरी सरकार अपदस्त र आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिई राज्यका सम्पुर्ण सञ्चारमाध्यममा शेन्सरलगाई जनताको सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिता माथी नाङ्गो हस्तक्षेप गरेसँगै मुलुकमा दुईपटक शाही ‘कू’ गरेका थिए।
चौथो दुई – माओवादी खारा आक्रमण
२०५२ सालबाट सुरुभएको जनयुद्धको चर्को चपेटासँगै मुलुकमा चलिरहेको युद्धहरु मध्येका खाराको दोस्रो लडाइँ २०६१ चैत २५ गते राति रुकुम स्थित सैन्य अड्डामा भएको थियो । यसलाई नेपाली गृहयुद्धको प्रमुख लडाईहरु मध्ये महत्वपूर्ण लडाईको रुपमा लिइन्छ । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले आफ्नोतर्फ अत्यन्त न्यूनतम क्षति बेहोर्दै आक्रमण गर्न आएका माओवादी जनमुक्ति सेनालाई हराउन सफल भएका थिए । जबकि जनमुक्ति सेनाको तर्फ ठूलो संख्यामा हताहतको पुष्टि भएको थियो । पहिलो खारा आक्रमण पछी खारामा बिमान भेदी हतियार (Anti aircraft gun) राखिएको थियो । माओवादीहरूले भने हेलिकप्टरहरुद्वारा गरिने आक्रमणबाट आजित भै त्यही हतियार प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ लड्न गएका थिए । तर युद्धमा दुई कमान्डरको आपसी तालमेल नमिल्दा दोस्रोपटक खारा युद्ध हार्न पुगेको तथ्यहरु बाहिर आएको पाइन्छ ।
पाचौं दुई – संबिधान सभा निर्वाचन २
वि.सं. २०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालमै पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा जम्मा ७४ वटा पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । बहुप्रतिक्षित संविभानसभाको निर्वाचन मार्फत विगतमा सशस्त्र जनयुद्ध गरेर आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी देशकै ठूलो पार्टीको रूपमा उभिन पुग्यो । ठुलो पार्टी बन्न सफल भएतापनि संसदमा आवश्यक पुर्णबहुमत नहुँदा गठबन्धन सरकारको कारण समयावधि मै संविधान जारी गर्न नसक्नाले दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचन हुन पुगेको थियो । बाधा अड्चन र असहमतिहरुका बिच संविधान सभा निर्वाचन २०७० नेपालको इतिहासमा दोस्रो पटक भएको संविधान सभा निर्वाचन हो । यो निर्वाचन २०७० मंसीर ४ गते सम्पन्न भएको थियो ।
छैठौं दुई – एउटै व्यक्ति दुई पटक राष्ट्रपति
विभिन्न कालखण्डका क्रान्ति जनबिद्रोह र जन आन्दोलनहरु मार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गरि मुलुकमा संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो । योसँगै नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा बिक्रम संवत् २०६५ साउन ०७ गते डा. रामवरण यादव निर्वाचित हुनुभयो । राष्ट्रपति यादवको २०७२ साल कार्तिक ११ गते कार्यकाल समाप्त भएसँगै नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको लागि निर्वाचन भयो । दोश्रो राष्ट्रपतिको रुपमा श्रीमती बिध्यादेवि भण्डारी २०७२ साल कार्तिक ११ गते निर्वाचित हुनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारी २०७४ फागुन २९ गते दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारी नेपालको ईतिहासमा दुईपटक राष्ट्रपति हुने पहिलो व्यक्ति हुन् ।
सातौ दुई – एकै प्रधानमन्त्रीले दुईपटक संसद विघटन ः
२०४७ सालको संविधानमा जस्तो हालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । तर पुर्व प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले अपरझठ फिल्मी शैलीमा पुस ५, २०७७ मा पहिलोपटक संसद विघटन गरेका थिए । सरकारले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपनि सर्बोच्चमा परेको रिट निवेदन माथि छलफल हँुदा उक्त कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको थियो । त्यस्तै दोस्रोपटक पुर्व प्रधानमन्त्री केपि वलि कै मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा २०७८ जेठमा गरिएको संसद विघटनको निर्णयलाई सदर गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपालको संविधानको ‘धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५’ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरि वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणको निर्वाचन घोषणा समेत गरिएको थियो ।
(चर्चामा रहेका दुई कुराहरुको बारेमा हाम्रा पाठकहरुले अध्ययन गरेर ईतिहास र बर्तमानको अबस्थाका बारेमा ज्ञान बढाउने उद्देश्यका साथ यो सामाग्री प्रस्तुत गरिएको छ । यस २ द्योतकका शब्दहरु चिशंखुगढी गाउँपालिका वडा नं. ७ स्थायी घर भई हाल बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा रहनु भएका रामजी तामाङले संकलन गर्नुभएको हो । – सम्पादक )